Fomba Nitondran’i Jesosy ny Boka | Fisaraham-panambadiana Fahiny
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Batak (Toba) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kamba Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Myama Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nias Niue Norvezianina Nyaneka Nzema Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tchouvache Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Venda Vietnamianina Wallis Wolaita Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Nahoana no niavaka ny fomba nitondran’i Jesosy ny boka?
Areti-mifindra ny habokana ary tena natahoran’ny Jiosy fahiny ilay karazany fahita tamin’izany. Mety hisy vokany amin’ny selam-pitatitra izy io, ka lasa manan-takaitra ilay marary ary simba be ny vatany. Tsy nisy fanafany izy io tamin’izany. Natokan-toerana ny boka, ary tsy maintsy niantsoantso mba hampitandremana ny hafa.—Levitikosy 13:45, 46.
Hentitra loatra ny fitsipika nataon’ny mpitondra fivavahana jiosy momba ny boka, fa tsy araka ny Soratra Masina. Nanampy trotraka ny fahorian’ireo marary izany. Tsy azon’ny olona natao mihitsy, ohatra, ny nanatonkatona boka. Tsy maintsy nisy elanelana 4 hakiho (2 metatra eo ho eo) teo amin’izy ireo, fa 100 hakiho (45 metatra eo ho eo) kosa raha nitsoka ny rivotra. Milaza ny Baiboly fa “any ivelan’ny toby” no fonenan’ny boka. Nandika vilana an’izany ny mpandalina ny boky Talmoda, ka nilaza fa tsy tokony hipetraka ao anaty tanàna mimanda ny boka. Izany no nahatonga ny raby iray hitoraka an’ilay boka hitany tao an-tanàna sady hiteny hoe: “Mandehana mankany amin’ny fonenanao any fa aza mandoto olona atỳ.”
Hafa mihitsy anefa i Jesosy. Tsy nandroaka an’ireo boka izy, fa vonona hikasika azy ireo ary nanasitrana azy ireo mihitsy aza.—Matio 8:3.
Inona avy ny antony nolazain’ny mpitondra fivavahana jiosy fa azo isaraham-panambadiana?
Taratasy Fisaraham-panambadiana Tamin’ny Taona 71 na 72
Nampiady hevitra ny mpitondra fivavahana tamin’ny taonjato voalohany ny resaka fisaraham-panambadiana. Nanontany an’i Jesosy àry ny Fariseo hoe: “Azon’ny lehilahy atao ve ny misaraka amin’ny vadiny na inona na inona antony?”—Matio 19:3.
Nilaza ny Lalàn’i Mosesy fa mahazo misaraka amin’ny vadiny ny lehilahy iray, raha “nahitany zavatra manafintohina” taminy. (Deoteronomia 24:1) Samy nanana ny fahazoany an’io lalàna io ireo raby tamin’ny andron’i Jesosy. Somary hentitra kokoa ny an’ireo mpanaraka ny fampianaran’i Samay. Midika, hono, izy io fa ny fijangajangana ihany no ahafahana misara-panambadiana. Ireo mpanaraka ny fampianaran’i Hilela kosa nilaza fa azon’ny lehilahy atao ny misaraka amin’ny vadiny raha vao misy olana eo amin’izy ireo, na dia kely aza. Ohatra hoe tsy tiany ny sakafo naroson’ny vadiny, na nahita vehivavy noheveriny fa tsara tarehy kokoa izy.
Ahoana no namalian’i Jesosy ny fanontanian’ny Fariseo? Hoy izy: “Izay misaraka amin’ny vadiny ka manambady olon-kafa, dia manitsakitsa-bady, raha tsy hoe noho ny fijangajangana ihany angaha no antony isarahany.”—Matio 19:6, 9.
Nahoana no i Jesosy avy any Nazareta no nanan-kery be indrindra teo amin’ny fiainan’ny olona hatramin’izay?